Wararka - Waa Maxay Baadhitaanka Hubku?
Hubi filtarka guud ahaan waxaa lagu rakibay dhuumaha si looga hortago dib u soo noqoshada. Waalka jeeg asal ahaan waa waalka hal-waddo, qulqulka ayaa si xor ah ugu socon kara hal dhinac, laakiin haddii socodka qulqulo, waalka waa la xirayaa si loo ilaaliyo dhuumaha, qalab kale, bambooyin, iwm. Haddii dheecaanku rogrogo laakiin jeegga waalka lama rakibin, dubbe biyo ayaa dhici kara. Dubbe biyaha badanaa waxay ku dhacdaa xoog xad-dhaaf ah waxayna si fudud u dhaawici kartaa dhuumaha ama qaybaha.
Waxyaabaha ay tahay in fiiro gaar ah la siiyo marka la dooranayo waalka jeegga
Markaad dooranaysid waalka jeegga, waxaa muhiim ah in la sameeyo falanqeyn kharash-faa'iido leh oo nidaam gaar ah leh. Ujeedada caadiga ah waa in la yareeyo kharashka inta la helayo cadaadiska ugu hooseeya ee suurtagalka ah, laakiin jeegaga hubinta, nabadgelyada sare waxay la mid tahay luminta cadaadiska sare. Sidaa darteed, si loo hubiyo nidaamka ilaalinta waalka jeegga, nidaam kasta wuxuu u baahan yahay in si gooni ah loo qiimeeyo, iyo qodobbada ay ka midka yihiin halista dubba biyaha, luminta cadaadiska la aqbali karo, iyo cawaaqibka dhaqaale ee ka dhalan kara kaarka jeegga waa in loo tixgeliyaa dubbe biyaha.
Si aad awood ugu yeelatid xulashada saxda saxda ah ee dalabkaaga, waxaa jira shuruudo xulasho oo badan oo ay tahay inaad tixgeliso. Ugu horreyntii, ma jiro nooc ka mid ah qalabka wax lagu baaro oo ah xulashada ugu fiican dhammaan codsiyada, iyo shuruudaha xulashaduna si isku mid ah muhiim uguma aha xaaladaha oo dhan.
Shuruudaha xulashada qaarkood ee la tixgelinayo markii la dooranayo qalabka wax lagu xiro
Waxyaabaha qaarkood ee laga yaabo inaad u baahato inaad tixgeliso waa iswaafaqsanaanta dareeraha, astaamaha qulqulka, madax luminta, sifooyinka aan saamaynta lahayn, iyo wadarta qiimaha lahaanshaha. Si loo helo waxqabadka ugu fiican, dabcan waa muhiim in la doorto waalka iyadoo la raacayo astaamaha hababka rakibaadda ee kala duwan.
Dhammaan qalabka baaritaanka waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo biyaha laguna daaweeyo biyaha wasakhda ah, laakiin daaweynta biyaha wasakhda ah / wasakhda wasakhda ahi waxay sababi karaan dhibaatooyin. Markaad xulaneyso fureyaasha dareereyaashan, waa inaad u baahan tahay inaad tixgeliso sida jiritaanka cunnooyinka adag ay saameyn ugu yeelan karaan howlaha waalka.
Haddii qalabka wax lagu xiro uu dhaqso u xirmo, waxaa suurtagal ah in laga hortago xajiinta. Si kastaba ha noqotee, xiritaanka degdegga ahi kama horjoogsanayso kacsanaanta dhacda marka bamka la bilaabo oo la xidho. Haddii waalka si dhakhso leh u furmo (oo xirmo), heerka socodka ayaa si lama filaan ah isu beddeli doona oo kororka ayaa u badan.
Madax-luminta madaxa waa fal xawaaraha dareeraha. Dhimista madaxa madaxa waxaa saameeya xaaladaha socodka nidaamka iyo dusha sare ee waalka. Joomatari ee jirka waalka iyo nashqadda xiritaanka ayaa go'aamiya aagga socodka iyada oo loo marayo waalka sidaas darteed sidoo kale waxay saameyn ku yeelataa madaxa luminta.
Khasaaraha madaxa ee la tixgelinayo waa isku darka madaxa ma guurtada ah (oo ay sababtay kala duwanaanta dhererka) iyo madaxa khilaafku (oo ay keeneyso tuubbada iyo waalka gudaha). Iyada oo ku saleysan saldhigan, waxaa jira qaaciidooyin badan oo loogu talagalay madaxa madaxa iyo qiimaha la qiimeeyay. Tan ugu caansan waxay noqon kartaa isku-dheellitirka socodka ee xaddiga biyaha ee maraya waalka oo leh hoos u dhac cadaadis cayiman waqti cayiman. Laakiin isbarbardhigga, waxaa loo tixgeliyaa in iska caabinta Kv ay tahay doorashada ugu fiican.
Wadarta qiimaha lahaanshaha
Qiimaha waalkaaga jeegga waxaa ku jiri kara wax ka badan qiimaha wax iibsiga. Rakibaadaha qaarkood, qiimaha ugu muhiimsan ayaa laga yaabaa inuu iibsado iyo rakibid, laakiin xaaladaha kale, dayactirka ama kharashka tamarta waxay noqon kartaa mid muhiim ah ama xitaa ka sii muhiimsan. Markaad isticmaaleyso kharash ahaan shuruudaha xulashada waalka jeegga, qiimaha guud ee nolosha noloshu waa in sidaa darteed loo tixgeliyaa. Guud ahaan, qaab-dhismeedka waalka oo fudud, ayaa hoos u dhigaya shuruudaha dayactirka.
Waxyaabaha aan slam ahayn
Hubi waalka Slam wuxuu sababa cadaadiska nidaamka inuu isbeddelo. Tallaabada ugu horreysa ee hawshan waa in la beddelo socodka marka bamka istaago. Tani waxay sababi kartaa xoogaa dib u rogid ah iyada oo loo marayo waalka ka hor inta wiishku uusan gaarin booska uu si buuxda u xiran yahay. Kadib socodka qulqulka waa la xirayaa, isbeddelka socodka socodka wuxuu u beddelaa tamarta dareeraha ee dareeraha cadaadis.
Slamku wuxuu u eg yahay codka la maqlo marka saxanka ama kubbadda qalabka wax lagu garaaco ay ku dhacaan kursiga waalka, waxayna soo saartaa buuq badan. Si kastaba ha noqotee, dhawaqaani ma aha mid ku xiran jirka, laakiin waa mowjado dhawaq oo ay soo saaraan miiqyada cadaadiska ee fidiya gidaarka tuubbada. Si looga fogaado gebi ahaanba isku-dhufashada, waalka jeegga waa in la xiraa kahor xawaare kasta oo gadaal ah. Nasiib darrose, taasi ma dhicin. Joomatari ee waalka ayaa go'aaminaya inta dib u socodku dhici doono, sidaa darteed sida ugu dhakhsaha badan ee uu xirmo waalka ayaa yaraanaya.